Loka, fahafatesana sy tsingerintaona nahaterahana ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Maraokana · Global Voices teny Malagasy
Loka, fahafatesana sy tsingerintaona nahaterahana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Maraokana
Voadika ny 22 Jolay 2018 19:26 GMT
Fifaliana ho an'i M.S Hjiouj izay tsy nankalaza fotsiny ny tsingerintaona nahaterahany, ny voalohan'ny volana Aprily ny tamin'ny herinandro lasa fa koa nahazo ny loka volana Martsa ho an'ny tranonkala aterineto Arabo 4 izy.
fanapahan-kevitray ny hoe ny tranonkalanao mijoro ambonin'ny hafa eo amin'ny kalitaon'ny sary, ny endriky ny tranonkala sy ny fanintonana manontolo. Ankasitrahanay ny fisian'ny tranonkala tahaka izany ao amin'ny aterineto, ary manantena fa ho lasa hitan'ny vahoaka bebe kokoa ny tranonkalanao amin'ny alalan'ity loka ity.
Koa dia arahabaina ho an'ny “coup de coeur” antsika tamin'ny herinandro lasa
Veloma farany Fadi!
Namoy ny ainy tamin'ny herinandro lasa i Fadi, ary banga azy sahady ny tontolon'ny bilaogy Maraokana. Mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany sy ny namany
Mafy tamiko ny niala tamin'ny fahafatesana ary niditra fety, niala alahelo niditra fifaliana saingy moa tsy mpifanolo-bodirindrina ny fiainana sy fahafatesana!
Eny, inoy izany na tsia, vao 24 taona monja i M.S Hjiouj ! Nihevitra aho fa mbola zokiny mihoatra noho izany izy satria maneho ny fahamatorana sy ny fahatsapana hevitra tia manadihady zara raha hitanao eo amin'ireo bilaogera tanora ny votoatim-bilaoginy. Na izany aza, Tratry ny tsingerintaona nahaterahanao ianao!
Nankalaza ny andro nahaterahany tamin'ny voalohan'ny volana Aprily ny bilaogera malaza iray hafa eo amin'ny tontolon'ny bilaogy Maraokana. Tsy milaza ny taonany i Larbi, tsy nibilaogy momba ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany koa aza izy. Hitako izany noho ny iray amin'ireo fanehoan-kevitra marobe avelan'i Larbi ao amin'ny ankamaroan'ny bilaogy Maraokana. Tratry ny tsingerintaona nahaterahanao ianao Larbi!
Afaka manomboka miresaka momba ny bilaogy ara-politika any Maraoka ve isika? Hoy i Bla Faransya manontany, mpanoratra ny bilaogy Without french, talk to me in my language, fellow citizen (Ivelan'ny teny Frantsay, dia resaho amin'ny fiteniko aho, ry olom-pirenena namana).
Bla Faransya dia tena manana fanantenana tsara ho an'ny ho avin'ny bilaogy ao Maraoka. Mino mihitsy aza izy fa ho lasa fitaovana matanjaka toy ny fomba nanombohan'izany tao amin'ireo firenena sasany tahaka an'i Etazonia sy Iran.
Manameloka ireo polisy manampahefana mpanao kolikoly mampiasa fomba mampihoron-koditra mba hanerena olona tsy manan-tsiny hibaboka amin'ny heloka tsy nataonyi Bluesman.
Amine kosa manakiana an'i Frantsa noho ny tahotra amin'ny hoavy sy ny fisalasalany amin'ny fanavaozana. Sary azony manokana farafaharatsiny taorian'ny fifandonana (niparitaka be tamin'ny fampahalalaham-baovao) teo amin'ny governemanta Frantsay sy ny sendikà momba ny First Job Contract (CPE) (Fifanarahan'Asa Voalohany) izay manome zo ho an'ny orinasa mba handroaka izay latsaky ny 26 taona ao anatin'ny roa taona.
Resabe amin'ny (saika) tsinotsinona!
Mamaky bilaogy na…mihaino izany!
Manomboka izao, dia afaka mihaino ny View From Fez ianao, ka ankafizo izany!
Indraindray mahagaga ahy ny fandrosoana ara-teknolojika. Tahaka izany ny androany noho ny AGORAVOX – Tao amin'ity tranokala hitako ity, afaka mihaino ireo lahatsoratra ao amin'ny View From Fez aho! Dingam-pandrosoana iray noho izay efa niainako ny feo elektronika- ka tsara henoina, indrindra raha tsy dia mahita tsara ianao
Nahatonga ny rehetra manembona ity toerana mahavariana ity hibitsika ny fanirian'izy ireo hiverina ny sarin'i Djemaa_el_Fna iray nalefan'i Anima, aoanatin'ny segondra iray, manandràma sy mafòha ny sakafo mafilotra izay tsy ho hitanao afa-tsy ao amin'ity faritra malaza ao Marrakesh ity ihany.
Karim kosa nandefa tononkalo iray tiako ho vakiana. Antsoina hoe Dreamer (Mpanonofy), avy amin'i Brian Moses izany.
Nanonofy nandoko tsikitsiky aho
teo amin'ny tavan'ny tany
ho an'ny rehetra mba hijery izany.
Raha nilaza i Issam fa ny “For bread alone (ho amin'ny mofo ihany)” nosoratan'i Mohamed choukri dia nahalafosana betsaka indrindra noho ny votoatiny ara-nofo, dia tsy miombo-kevitra mihitsy aho. Saingy tiako ny mitsidika ny bilaogin'i Issam, noho ny lahatsorany mahaliana, fampahafantarana mahafinaritra ary ny endrika mahatsikaiky mahavariana.
Izay ny androany. Amin'ny herinandro manaraka indray, Inshallah.